Askari toogasho ka geystay Muqdisho,kadibna baxsadey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa uu Darawal Gaariga dadweynaha ee BL-ka waxaa uu ku diley degmada Dharkeenleey ee Gobolkaan Banaadir.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in askariga uu darawalka gaariga ku amrey in uu joojiyo xilli uu mareyay agagaarka Jiirada Macalin Nuur,hayeeshee darawalka uu joojin waayey,isla markaana askariga uu dhowr xabadood ku ridey.
Askariga falka geystey ayaa goobta ka baxsadey,waxaana rasaastii uu ridey ay ku dhacdey darawalkii gaariga oo isla goobta ku geeriyoodey,sida ay sheegen dad goobta tegay.
Wararka ayaa waxaa ay inatasi ku darayaanin halka uu dilka ka dhacay sy sidoo kale gaareen Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya iyo Ehelada Marxuumka,iyaga oo meydka u qaadey Xarunta dambi-baarista ee CID-da.
Dilka askariga ka tirsan Ciidamada Dowladda uu Mugdisho ugu geystay Darawalka Gaariga dadweynaha oo Hoomey ahaa ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli shalay Nin Darawal ahaa lagu diley Isgoyska ex-Koontorool Afgooye ee Magaalada muqdisho.